Izihloko ezi-6 zaSimahla zeWordPress ezikwiphepha lakho ledijithali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lua louro | | imixholo, Wordpress
Ukuba ufuna ukukhwela imagazini okanye iphephandaba ledijithali, Ngaphandle kwamathandabuzo kuya kufuneka uyenze ngoncedo lomphathi womxholo. Umphathi womxholo ngokugqwesa, ngu WordPress: Nangona ivele njengeqonga elinye lokudala iibhloko, ukusetyenziswa kwayo bekusasazeka (kwaye, ngenxa yoko, bekucoca imiba emininzi) kwicandelo lamaphepha ewebhu. Ke ngoko, lo ngumphathi womxholo ongafanele ukuwutyeshela xa usenza iphepha lakho.
Kule posi sikunika uhlalutyo oluncinci, kunye nekhonkco lokukhuphela, le-6 iitemplate zewebhu eziphendulayo o imixholo yasimahla yokuphendula ukuze uqalise ngaphandle kokwenza utyalomali olukhulu. Ndiyathemba ukuba uyakuthanda ukudityaniswa kwaye ezi zihloko, ngokukodwa zenzelwe amaphephancwadi okanye amaphephandaba, ziluncedo kuwe.
Izihloko ezi-6 eziPhendulayo zaSimahla
umculo: Umxholo ophendulayo wekholamu ezi-4 oya kusombulula iimfuno zethu eziphambili xa kusenziwa iphephandaba. Sine-injini yokukhangela yangaphakathi, ukubakho kokubandakanya amaphepha kwimenyu ephambili ukongeza kumacandelo enqaku, ibha esecaleni ekunene kunye neposti efundwayo, ii-tweets zamva nje kwiakhawunti yethu ye-Twitter, njl. Ngokubhekisele kumbindi, isilayida esinomdla sokubonisa iindaba zamva nje kunye neekholamu ezintathu ezinyaweni apho kungeniswe khona izithuba. Ukongeza, iya kubonisa kwi-header Imozulu eqikelelweyo yendawo ekuyo umfundi kunye nobushushu.
I-WPHerald LiteIzalathiso, ngenxa yolwakhiwo, kwi uyilo olungaphezulu ngaphezu kwetemplate yangaphambili. Eyona nto iphambili kuyo ngaphezulu kokubakho kweemenyu ezimbini (enye ephezulu, enamakhonkco ekusebenzeni kwephepha njengeqela labahleli, imirhumo, intengiso, izimvo, njl.njl.) Kunye neyona iphambili ineendidi zayo. Ngaphaya koko, apha ngezantsi kule menyu iscroll esineendaba ezigqityiweyo. Ikwabandakanya injini yokukhangela yangaphakathi kunye nekhonkco kunxibelelwano lwasentlalweni. Lubonakala ngo ubungcathu ngemibala.
Indawo engenantoUmxholo wekholamu ezintathu, kunye nokusetyenziswa kancinci kombala kunangaphambili. Enhle, inalo imenyu enye engundoqo. Kwinqanaba elisekunene siza kufumana ii-icon zentlalo, i-injini yokukhangela yangaphakathi, amagqabantshintshi okugqibela kwiphepha kunye namanqaku akutshanje. Kwindawo ephambili yebhlog, amanqaku. Singaguqula ubuchwephesha bephepha liphela kunye nemibala, phakathi kwezinye izinto.
Cala: Inqabile kancinci kune-Emptilium, isasaza umxholo kwiikholamu ezintathu kwaye ivumela iimenyu ezimbini, ephezulu (ekusebenzeni kwephepha) kunye neyona iphambili. Veza isilayida ngeendaba zamva nje ngaphambi kokuba siwubone umxholo. Amanqaku acwangciswe kwiscreen esikhumbuza i ubungqingqwa obungqingqwa.
Hueman: ngokungacwangciswanga kunangaphambili, iqulethe iimenyu ezimbini (ngaphezulu kunye nokuphambili). Ngeekholamu ezintathu, ithatha unonophelo lokuchwetheza kwaye kukhululekile ukuhamba kwiphepha. Ibandakanya ii icon zentlalo zombini phezulu nasezantsi kunye nenjini yokukhangela yangaphakathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » imixholo » 6 Imixholo yasimahla yokuphendula kwiphephandaba lakho ledijithali
Enkoso ngokwabelana. Ndingathanda ukuba ujonge ezi ndaba, inqaku elihambelana nomxholo weWordPress obizwa ngokuba Ybrant
Inezinto ezilandelayo ezinje,
~ Ikhasi lasekhaya eliBanzi ngokupheleleyo
~ 15+ iiwijethi zesiko
~ 10+ Umxholo weeKhowudi ezimfutshane
~ Igalari kunye nevidiyo yefomathi yenkxaso kunye nokunye okuninzi ...